Raharaha fanenjehana jiolahy :: Nisy nanodinkodina ny taratasy tsiambaratelon’ny Zandarimaria • AoRaha
Raharaha fanenjehana jiolahy Nisy nanodinkodina ny taratasy tsiambaratelon’ny Zandarimaria
Mpamosavy malemy! Tohina mafy tamin’ny tranga tao amin’ny Sekretariam-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria na ny Seg. Tompon’antoka tamin’ny fanodinkodinana taratasy mirakitra tsiambaratelo nitranga tao amin’io departemanta mifehy ny Zandarimaria io ny zandary iray miasa ao ihany.
Natolotra ny Fitsarana itsy voarohirohy. Naiditra am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy izy, tamin’ny zoma 9 aogositra lasa teo.
“Taratasy fitarainan’ny olona momba ny asan-dahalo mahery vaika io nisy nanodinkodina io. Niantso ny dahalo raindahiny voatonona tao anatiny ilay zandary rehefa nahafantatra ny momba ny tranga fitarainana. Teo am-panaovana dika mitovy an’ireo antontan-taratasy rehetra io zandary io sady nikasa ny hanome ireo fitarainana ny olona voakasika izy no nisy nampandre izahay tato amin’ny Zandarimaria. Nokarohina ny antony nahatonga ny fivoahan’izany antontan-taratasy saro-pady izany tamin’ny famotorana. Taorian’izay no nahalalana fa olonay ato ihany no tompon’antoka. Natolotra ny Fitsarana ny raharaha ka izy ireo no nanapa-kevitra nampiditra am-ponja any Tsiafahy an’ilay voampanga”, hoy ny loharanom- baovao avy eo anivon’ny Sekreteriam-panjakana miadidy ny Zandarimaria.
Zandary fito hafa
Ankoatra an’ity tranga ity dia mbola misy zandary dimy hafa henjehina noho ny fandikan-keloka ihany koa sady efa naiditra am-ponja vonjimaika, tamin’ny zoma 9 aogositra io. “Voarohirohy vokatry ny fifandraisana tamin’ny asan-jiolahy ireo zandary ireo”, hoy hatrany ny loharanom-baovao akaiky ny Zandarimaria.
Fantatra ihany koa, omaly, fa mbola misy taratasy fahafahana manenjika zandary roa eny amin’ny Fitsarana voalaza fa nandray vola nanao kolikoly tany amin’ny faritra Sava. Nosoniavin’ny Seg, omaly ny antontan-taratasy mikasika izany. “Azo sary ireo zandary ireo naka vola tamin’olona. Tsy handefitra amin’ny tranga toy izany mihitsy ny tenako. Efa naverimberiko hatrany isaky ny mihaona amin’ny fianakaviamben’ny Zandarimaria aho, fa tsy fihetsik’olona iray na roa na telo no hanimbana ny Zandarimaria. Fa indrindra, tsy ireo zandary natao hampihatra ny lalàna indray no miray tsikombakomba amin’ny asan-jiolahy”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, raha nanontaniana momba ireo raharaha ireo.
Fandrobana niharo fandratrana :: Vadina mpitandro filaminana voarohirohy ho nanafika sefo fokontany teo aloha
Loza an-dranomasina :: Italiana iray namoy ny ainy, Malagasy iray tsy hita popoka